नेकपा विमानको अवतरण कि दुर्घटना ?
ओलीको जवाफ थियो, ‘तपाईंले पार्टी विभाजन भयो भन्दै हिँड्नुभएको छ, त्यो कुरा सही हो, पार्टी विभाजन त भइसक्यो नि ! भिन्दै बैठक गर्नुहुन्छ, गुटका निर्णयलाई पार्टीको निर्णय भन्नुहुन्छ । अब तपाईंहरू बैठक बस्नुस्, मलाई निकाल्ने हो कि के गर्ने हो त्यो पनि गर्नुस् । त्यसपछि आ–आफ्नो बाटो लागौँला ।’ ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टी एकता बचाउने अब एउटा मात्र उपाय छ । तपाईंले माधव नेपाललाई छाडेर आउनुस् । त्यसपछि एकता बच्छ, नत्र सम्भव छैन ।’ ‘म प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै छाड्दिनँ, अरू केही प्रस्ताव छन् भने छलफल गरौँ, त्यसका लागि तयार नै छु ।’ त्यसपछि छलफल कुनै ठोेस सहमतिविना टुंगिएको थियो । तर, शनिबार फेरि बसौँला भन्दै नेताहरू उठेका थिए ।
‘म प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै छाड्ने पक्षमा छैन, यदि पार्टी एकता कायम गर्ने हो भने तपाईंले माधव नेपाल र ममध्ये एउटा विकल्प छान्नुस्,’ खुमलटारमा नेताहरूलाई प्रचण्डले गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘तपाईंले एकताका लागि एउटा टिम रोज्नुस्, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छाड्ने कुरै नगर्नुस्, बाँकी अरू विषयमा छलफल गरेर सहमति गर्न सकिन्छ भनेपछि छलफल सकारात्मक नभएको जानकारी गराउनुभयो ।’
सत्ता र शक्तिसंघर्षले पार्टी विभाजनसम्मको खतरा उत्पन्न भएपछि नेकपाका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले सक्रियता बढाएका छन् । शनिबारसम्म स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएकै बेला दोस्रो पुस्ताका नेताहरु शुक्रबार सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका हुन् ।
शुक्रबार बिहानै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको निवासमा भेला भएका नेताहरुले पार्टी एकता जोगाउन ‘युद्धविराम’का लागि आग्रह गरका थिए । मन्त्री घनश्याम भुसालको निवासमा योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, विष्णु रिमाल, टोपबहादर रायमाझी, मणि थापालगायतका नेताहरु भेला भएर नेतृत्वमाथि दबाब बनाउने योजना बनाएका हुन् ।
नेता शर्माका अनुसार आजको छलफलमा ठोस सहमति नभएको हुँदा शनिबार बैठक बस्नु अघि फेरी दुई अध्यक्षबीच छलफल गर्ने सहमति भएको छ । नेकपा बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित छ । यहि बीचमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको हस्तक्षेप र दबाब कति प्रभावकारी हुन्छ? चासोपूर्वक हेरिएको छ ।